Farming Simulator 16 9.8.royaldevelop.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.8.royaldevelop.6 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Farming Simulator 16
Farming Simulator 16 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Simulator က 16 လယ်ယာသင်ထူးခြားသောအသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ကျကျလယ်ယာစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ စက်ရုံ, စပါးရိတ်ရာကာလကြီးထွားနှင့်ငါးဦးကွဲပြားခြားနားသောကောက်ပဲသီးနှံများကိုရောင်းချ, နွား, သိုးမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာကျွန်းသစ်ကိုရောင်းလိုက်သည်။ သင့်ရဲ့လယ်ယာထိုပြည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်သစ်ကိုလယ်ကွင်းများကိုဝယ်ကြလော့။ စပါးရိတ်ခြင်းနှင့်လယ်ထွန်စက်တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. , ဒါမှမဟုတ် AI အကူညီပေးသည်နှင့်ကို full screen စီမံခန့်ခွဲမှုမြေပုံကိုမှသင်၏ကြီးထွားလာလယ်ယာစီမံခန့်ခွဲငှားရမ်း။
စိုက်ပျိုးရေး Simulator ဂိမ်းစီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်, ဒီဂိမ်းစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍခြင်း simulation ၏အကောင်းဆုံးရှိပါတယ်။ ဒီဂိမ်းဟာနယူးဟော်လန်, ဖြစ်ရပ်မှန် ih, Ponsse, Lamborghini က, Horsch, ခရိုဏာ, Amazon, MAN နဲ့ပိုပြီးအပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်သူများ 20 ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကနေဧရာမလယ်ထွန်စက်များနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး Simulator 16 အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
- နယူးက 3D ဂရပ်ဖစ်သင့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းအပေါ် ပို. ပင်အသေးစိတ်ပြသရန်!
- စက်ရုံနှင့်စပါးရိတ်ရာကာလငါးနှစ်ကွဲပြားခြားနားသောကောက်ပဲသီးနှံများ: ဂျုံ, canola, ပြောင်းဖူး, သကြား beet နဲ့အာလူး
- တစ်ဦးမှာ dynamic ဈေးကွက်အတွက်သင့်ရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံများကိုရောင်းချ
- သစ်တောရေးရာမိုဘိုင်းသွားပြီဟု! ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောစက်ပစ္စည်းနှင့်အတူစပါးရိတ်ရာကာလသစ်သားနှင့်ကျွန်းသစ်ရောင်းချရန်
- ပိုကောင်းရလဒ်အတွက် AI အကူ Manage
- (က Android TV ပေါ်မှာမရရှိနိုင်) Wi-Fi နှင့် Bluetooth ဒေသခံ multiplayer mode မှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ Play
- က Android TV ထောက်ခံမှု
Farming Simulator 16 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Farming Simulator 16 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Farming Simulator 16 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
royaldevelop စတိုး 130 324.3k
Farming Simulator 16 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Farming Simulator 16 အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.8.royaldevelop.6
Farming Simulator 16 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ